Imibuzo emihlanu yokuvavanya ukuThengisa kunye nokuLungelelaniswa kweNtengiso » Martech Zone
Esi sicatshulwa siye sanamathela kum kwiveki ephelileyo:
Injongo yentengiso kukwenza ukuthengisa kungafuneki. Injongo yentengiso kukwazi kunye nokuqonda umthengi kakuhle kangangokuba imveliso okanye inkonzo iyamlingana kwaye iyazithengisa. Peter Drucker
Ngezixhobo ezinciphayo kunye nomthwalo womsebenzi owandayo kumthengisi ophakathi, kunzima ukugcina iinjongo zemizamo yakho yentengiso ngaphezulu kwengqondo. Yonke imihla sijongana nemicimbi yabasebenzi, ukuhlaselwa kwee-imeyile, amaxesha abekiweyo, uhlahlo-lwabiwo mali… bonke abachasayo kwinto ephambili kwishishini elisempilweni.
Ukuba ufuna iinzame zakho zentengiso zihlawule, kuya kufuneka uvavanye inkqubo yakho rhoqo kwaye ugcine isemagqabini indlela ezisetyenziswa ngayo izixhobo zakho. Nayi imibuzo emi-5 yokukukhokelela kwinkqubo efanelekileyo yokuthengisa:
Ngaba ngabasebenzi abajongana nabathengi bakho, okanye abaphathi babo, uyazi ngomyalezo onxibelelana nawo ngenkqubo yakho yentengiso? Kubalulekile, ngakumbi kunye nabathengi bakho abatsha, ukuba abasebenzi bakho baqonde okulindelweyo okusetiweyo kwinkqubo yentengiso kunye nentengiso. Ukugqitha kulindelo kwenza abathengi abonwabileyo.
Ngaba yinkqubo yakho yentengiso isenza kube lula kubathengisi bakho ukuba bathengise imveliso okanye inkonzo yakho? Ukuba akunjalo, kuya kufuneka uhlalutye imiqobo eyongezelelweyo yokuguqula umthengi kwaye ubandakanye neendlela zokuzoyisa.
Ngaba buqu, iqela kunye nesebe Iinjongo kumbutho wakho wonke ziyahambelana neenzame zakho zokuthengisa okanye ungquzulwano nabo? Umzekelo oqhelekileyo yinkampani ebeka iinjongo zokuvelisa abasebenzi ezinciphisa umgangatho wenkonzo yabathengi, ngaloo ndlela iyancipha imizamo yakho yokuthengisa.
Ngaba uyakwazi ukulinganisa buyela kutyalo mali kwisicwangciso ngasinye sakho? Abathengisi abaninzi banomdla kwizinto ezibengezelayo kunokulinganisa nokuqonda kanye ukuba yintoni esebenzayo. Sikholisa ukutsalela ekusebenzeni thina ezifana ukwenza endaweni yomsebenzi ohambisa.
Ngaba uyakhile Inkqubo yemephu yezicwangciso zakho zokuthengisa? Imephu yenkqubo iqala ngokwahlula-hlula amathemba akho ngokobungakanani, ngomzi mveliso okanye ngomthombo… emva koko kuchazwa iimfuno kunye nenkcaso nganye nganye… ke ukumiliselwa kwesicwangciso esiliqingqwa esifanelekileyo sokulinganisa iziphumo ukubuyela kwiinjongo ezimbalwa eziphambili.
Ukubonelela ngeli nqanaba leenkcukacha kwinkqubo yakho yokuthengisa iyakuvula amehlo akho kungquzulwano kunye namathuba ngaphakathi kwezicwangciso zokuthengisa zenkampani yakho. Ngumzamo omele ukuwenza kwakamsinyane kunokuba ungade emva koko!
tags: ulungelelanisoabasebenziurhwebo lwangaphakathiulungelelwaniso lwentengisoukuthengisa kunye nentengisoungquzulwano lokuthengisaulungelelwaniso lweenjongo zokuthengisaiinjongo zentengisoqhinga urhweboulungelelwaniso lomyalezoPeter DruckerUPeter Drucker quoteulungelelwaniso lokuthengisaukuthengisa kunye nentengisoUkunika amandla ukuthengisaulungelelwaniso lwentengiso
Sebenzisa i-jQuery ukuya kwiJuice kwiPhepha leWebhu eliQhelekileyo
Mar 20, 2009 ngo-10: 31 AM
Ukuthetha ulwimi lwam. Andikaze ndiqonde ukuba kutheni abantu bengenayo inkqubo kwaye ngendlela ikhalenda eyinkqubo. Iinkqubo zisebenza okoko nje zihlaziywa kwaye zihlala ziphuculwa. Abantu bayayeka ngokulula xa bezama ukuphuhlisa enye kwaye iintloni zayo yonke le nto; Zingaphi izimvo ezilungileyo ezonakaliswayo ngenxa yenkqubo embi?
Iposi elungileyo! Ngokukodwa, xa ucinga njengam! :)
Mar 20, 2009 ngo-11: 37 AM
Olu luhambo olukhulu lokuhamba kuyo nayiphi na inkqubo yentengiso. Ndijonge okwangoku kwiindlela ezintsha zokuthengisa kwinkampani yam kwaye andinayo imvelaphi yokuthengisa yokwenyani. Le bhlog sisixhobo esihle kum.
Mar 23, 2009 ngo 10:05 PM
Inombolo yesibini ibalulekile kwiintlanganiso zentengiso. Ndizibonile iindawo apho babiza intengiso, iqela lokuthintela ukuthengisa!
Isicatshulwa sikaMnu Drucker, ngentlonipho, yinto encinci ye-myopic. Ukuba incoko yile:
Iinjongo zentengiso, ke, iya kuba kukwenza ukuba intengiso ibeyinto engafunekiyo? Injongo yentengiso kukunxibelelana nomthengi kakuhle kangangokuba imveliso okanye inkonzo ayifuni kuthengiswa?
- Akukho namnye weziphumo